Run, Type2Phone dia amidy mandritra ny fotoana voafetra | Avy amin'ny mac aho
Run, Type2Phone dia amidy mandritra ny fotoana voafetra
Ity dia iray amin'ireo rindranasa izay mety ilaina amin'ny toe-javatra sasany ary amin'ny vidiny ankehitriny miaraka amin'ity fihenam-bidy ity dia azonao atao ny mividy azy io mora foana. Miresaka momba ny Type2Phone izahay, rindranasa iray izay efa hitantsika teo aloha hoe Mac aho ary hanampy antsika hanoratra mivantana amin'ny iPhone, iPad na Apple TV (mitaky tvOS 9.2 na avo kokoa) amin'ny alàlan'ny bluetooth sy ny fiononan'ny vatantsika fitendry. Izay rehetra tiana soratana amin'ny fitaovan'ny iOS dia azo atao mivantana avy amin'ny kitendry Mac miaraka amin'ity rindranasa ity.
Ny fandidiana dia tena tsotra ary mitaky fananana fotsiny IPhone sy Mac Bluetooth no avela miaraka amin'ny safidy "Visible Mode" raha miasa izy, raha tsy izany dia tsy ho afaka hiaraka. Amin'ny tranga Mac, ny fampidirana ny System Preferences> Bluetooth ary amin'ny iPhone dia ampandehanana avy amin'ny Settings ihany koa.
Ny hany zavatra toa tsy nihatsara hatramin'ny nanombohany, izay taona vitsivitsy lasa izay, dia ny tsy maintsy ahalalantsika ny fifandraisana voalohany amin'ny iPhone mba hiaraha-miasa, ny ambiny miasa foana tsy misy olana. Amin'izao fotoana izao dia amidy ny fangatahana saingy azo inoana fa hiakatra ny vidiny atsy ho atsy satria nahenaina nandritra ny andro vitsivitsy, Araraoty fa 1,99 € ny vidiny izao. Ny fepetra takiana dia ny fananana OS X 10.6.6 na taty aoriana apetraka amin'ny Mac ary ampifandraiso ny Bluetooth hahafahana mifandrindra, toy ny amin'ny kitendry tohana ao amin'ny iOS dia ao anatin'izany ny ISO ISO.
Type2Phone: Kitendry Bluetooth€ 9,99
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Mac App Store » Run, Type2Phone dia amidy mandritra ny fotoana voafetra
Video 2 GIF Converter, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra